MPIKARAKARA FETY AMAN-DANONANA : Feno 10 taona ny Lisy event Toamasina
Ny antoandron’ny talata 5 marsa lasa teo, namory mpanao gazety tao amin’ny Hotel Splendide Toamasina ny Lisy Event, mpikarakara fety aman-danonana. 5 mars 2019
Valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety niarahany tamin’ireo mpanohana ofisialy sy mpiara-miasa aminy. Ankoatra ny fampahafantarana ilay hetsika karakarain’izy ireo ao Toamasina miaraka amin’ny tarika Ry Kala Vazo ny zoma 5 avrily ao amin’ny Espace Stella Maris, dia nisy ny fampahafantarana ny Lisy Event. Lisy Event izay efa 10 taona nisiana amin’izao fotoana izao ary fanta-daza amin’ny fikarakarana fety aman-danonana goavana ao Toamasina.
Telolahy ireo namorona sy miara-miasa ao anatiny : Serge Judicaël Alfred, Andrianarivelo Zacharie ary i Heritiana Ramanantsoa.
Nambaran’ Andrianarivelo Zacharie fa ny taona 2008 nanomboka nisy ny Lisy Event. Ny fakana ny tarika Ambondrona no tena nahalalana azy. Nivelatra anefa izany fiaraha-miasa izany ka miara-miasa amin’ny artista maro samihafa izy ireo amin’izao fotoana izao anisan’izany ny tarika Ry Kala Vazo.
Araka ny fanazavan’i Heritiana Ramanantsoa, dia nahatsapa izy ireo fa tsy ampy ny sehatry ny fialamboly ao Toamasina, ka izany no nahatonga ny fahaterahan’ny Lisy Event mba hanome fampisehoana mendrika sy manara-penitra ho an’ny mponina ao Toamasina.
Manomboka amin’ity volana avrily ity ny fankalazana io faha-10 taona io ary tsy mifarana raha tsy amin’ny volana novambra. Eny anelanelany dia mbola hisy mpanakanto hafa hanafana ny fety. Ny volana novambra kosa, dia ny tarika Ambondrona no mamarana ny fankalazana ny faha-10 taonan’ny Lisy Event.